Soomaali "lagu helay maalgelinta" Al-Shabaab oo lasoo tarxiilay
Mas'uuliyiinta ammaanka Muqdisho ayaa lagu waramay in ay la wareegeen Mahdi Maxamed Xaashi.
WASHINGTON, US – Hay’adda socdaalka Mareykanka ayaa sheegtay in Khamiistii ay u soo musaafurisay Soomaaliya eedeysane 2016-kii loo maxkamadeeyay in uu maalgelin jiray kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Mahdi Maxamed Xaashi oo 31-sano jir ah isla markaana diyaarad gaara looga soo qaadey magaalada ay ku dhowaad sadexda milyan qof ku nool yihiin ee Chicago ayaa loo dhiibay mas'uuliyiinta ammaanka Muqdisho.
Thomas Feeley, oo kamid ah saraakiisha ciidamadda Chicago, ayaa tilmaamay in musaafurinta dambiileyaasha ay baajineyso dhacdooyin kale.
"Howlgalkeenu wuxuu daaran yahay in ay tarxiilno dhamaan shaqsiyaadka halista ku ah dadkeena," ayuu ku yiri qoraal kasoo baxay Hay'adda.
Sidda ay muujinayaan warbixinada, intii u dhaxeysay April 2008 illaa August 2012, Xaashi ayaa xubin ka ahaa xoogaga xiriirka la leh Al-Qaacida.
Sanadkii 2012-kii ayaa lagu waramay in loo dhoofiyey Mareykanka si loogu maxkamadeeyo Degmada Bariga ee gobolka New York.
Xaashi ayaa laga soo wariyey qiraal ku aadan in uu Al-Shabaab ku taageeri jiray agab. Janaayo, 29-keeda, 2016 ayaa lagu xukumay 9-sano oo xabsi ah, waxaana xeer-beegtadu fartay in guud ahaan laga saaro Mareykanka.
Markii laga soo daayey xabsiga federaalka ee magaalada Leavenworth ee ismaamulka Washington, Xaashi waxaa April, 2020 la dhigay saldhig ay maamusho Hay'adda Socdaalka halkaasoo tan iyo tarxiilistiisa uu joogay.
Tan iyo 2009-kii, Mareykanka waxaa laga soo musaafuriyey 3,700 oo ay ku jiraan qaar Soomaali ah, waxaana intooda badan loo maxkamadeeyay fal-dambiyeedo ay kamid yihiin dil, tuuganimo iyo ganacsiga maandooriyaha.
Soomaliya 25.03.2020. 17:50
Qaraxii is-miidaaminta ee ka dhacay nawaaxiga Sayidka ayaa soo if-bixiyey isbedelkaas.
Madaxii saadka guutada 6aad ee ciidamada Soomaaliya oo "la dilay"
Soomaliya 15.02.2020. 14:10
Mas'uul lagu khaarijiyey xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho
Soomaliya 11.02.2020. 08:09
Tuulooyinka la xorreeyay ee hoos u dhigay weerarada Al-Shabaab
Soomaliya 24.11.2019. 18:00
Mas'uul iyo sarkaal "fududeeyay" qarax oo maxkamad lasoo taagay
Soomaliya 17.10.2019. 14:46
Shaqsi Miino ku dhejiyey gaari qarxay oo lagu qabtay Muqdisho
Soomaliya 16.05.2019. 13:37